ခင်ရာဆွေမျိုး ~ White Angel
3:14 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 15 comments
ငွေမျက်နှာတခုကြောင့် မာန်ကိုချရင်းတရုတ်စားသောက်ဆိုင်ကြီးတခုမှာ ဧည့်ကြိုတာဝန် ကိုထမ်းဆောင်ရင်းကျမဘဝရဲ့တစိတ်တဒေသကိုဤဆိုင်ကြီးအတွင်းမှာနှစ်မြုတ်ခဲ့ရတယ်။
ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့နေ့တွေရှိသလိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နေ့တွေဟာလည်း မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။မိဘမရှိတော့တဲ့ကျမ၊မောင်နှမအရင်းအချာမရှိတဲ့ကျမအတွက် ဆိုင်မှာအလုပ်အတူတူလုပ်နေကြတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေဟာ ကျမရဲ့ညီအမတွေပဲပေါ့။ဆိုင်မှာပုံမှန်လာစားကြတဲ့ဧည့်သည်တွေဟာလည်းကျမရဲ့မိဘ၊
ဆွေမျိုးတွေလို့ကျမသဘောထားပါတယ်။တခါတလေစိတ်အခန့်မသင့်လို့ သူငယ်ချင်းတွေစကားများတဲ့အခါတွေရှိတတ်ပေမယ့်လည်းခနပါပဲ။မိဘ၊မောင်နှမ သားချင်းတွေကိုခွဲခွာပြီးနိုင်ငံရပ်ခြားမှာအလုပ်လာလုပ်နေတဲ့သူအချင်းချင်းမို့လားမသိ၊
ကျမအလုပ်လုပ်တဲ့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြမယ်နော်။
စတင်နှုတ်ဆက်သူဧည့်ကြိုဖြစ်သူ ကျမကို စာဖတ်သူများအရင်ဦးဆုံးတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။
ကဲ...ကျမနောက်ကလိုက်ရင်းဆိုင်ထဲကိုလျှောက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ကျမတို့ဆိုင်ကို ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယနှင့် စတုတ္ထလွှာဆိုပြီး(၄)ထပ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အထပ်တထပ်ဆီမှာ ကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေ အနည်းငယ်စီရှိကြပါတယ်။
ပထမထပ်။ ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရသောအထပ်ပါ၊ခလေးများပါသောမိသားစု၊
ဒုတိယထပ်။ ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရသောအထပ်ပါ၊လှေခါးတက်နိုင်သူ လူကြီးများ၊
အကြောင်းကတော့ ဧည့်ကြိုဖြစ်သူကျမမှ ဧည့်သည်များအတွက်စားပွဲနေရာချထားပေးရာတွင် စုံတွဲများကို ဒုတိယထပ်သို့ပို့လေ့ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်စားပွဲထိုးများမှ ဧည့်သည်များကို ဧည့်ခံရာတွင် ဧည့်သည်မိန်းခလေးကိုသာ အသားပေးပြီးပြောရပါတယ်၊
တတိယထပ်။ ။ Private Room လို့ခေါ်တဲ့သီးသန့်ခန်း(၂)ခန်း၊ပိုင်ရှင်သူဋ္ဌေး၏ရုံးခန်းနှင့် သန့်စင်ခန်းတို့ထားရှိသောအထပ်ပါ။ နိုင်ငံခြားသံတမန်များ၊အစိုးရအရာရှိများ
အေးအေးဆေးဆေးညစာစားခြင်းဖြင့် အနားယူတတ်ကြပါတယ်။ တချို့ကလည်းသီးသန့်ခန်းထဲမှာ မွေးနေ့ပွဲများ၊အပျိုည၊လူပျိုညများကို ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ ရုံးခန်းထဲမှာတော့ကျမတို့ရဲ့သူဋ္ဌေးဟာ တဆိုင်းလုံးကိုမြင်နိုင်တဲ့ ကင်မရာ(၁၆)လုံးရဲ့
စတုတ္ထထပ်။ ။ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ရှိသောအထပ်ပါ၊အပေါ်ဆုံးထပ်ဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များသောအထပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုမျက်နှာမူပြီးဆောက်လုပ်ထားသောဆိုင်ဖြစ်သည့်အတွက် ပင်လယ်ရှုခင်းအလှများကိုမြင်ရခြင်းကြောင့် ပြတင်းပေါက်နှင့်နီးသောစားပွဲများမှာ
အမြဲတန်းလိုလို လူပြည့်နေတတ်ပါတယ်။ဧည့်သည်များဟာ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံအပြည့်အစုံဝတ်မှသာလျှင် အပေါ်ဆုံးထပ်မှာထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
လူတန်းစားခွဲခြားပြီးပြောရမည်ဆိုလျှင် Executive Lounge(အထက်တန်းအလွှာ)ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများအတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၁၅)နှစ်အောက်ကလေးများ လုံးဝတက်ခွင့်မရှိပါ။ ကျမတို့ဆိုင်ဟာ နိုင်ငံခြားသားအများဆုံးလာရောက်သောဆိုင်ဖြစ်သည့်အတွက် ဧည့်သည်များဟာ အလွန်အမေးအမြန်ထူပါတယ်၊တရုတ်နိုင်ငံအကြောင်း၊ လူမျိုးအကြောင်း၊
ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းများကို မေးလေ့မေးထရှိသည့်အတွက် ဤအထပ်မှဝန်ထမ်းများဟာအင်္ဂလိပ်စကားပြောကြွမ်းကျင်သူ၊ဗဟုသုတပြည့်ဝသူများဖြစ်ရပါမယ်။
အခုဆိုရင် မြန်မာ(Burmese)ဆိုတဲ့ ကျမတို့ဝန်ထမ်းများရှိနေသည့်အတွက်
မြန်မာပြည်အကြောင်း လက်မလည်ရအောင်ပြောနေရပါတယ်။ တရုတ်မပုံစံမပေါက်တဲ့
ကျမတို့မြန်မာမတွေကိုကြည့်ပြီး "Are you Chinese"လို့မေးတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျမတို့က
လည်အောင်ပြောပြရတော့တာပါပဲ။ Cyprus က ကျမနေတဲ့မြို့လေးမှာတော့
ကျမတို့ဆိုင်ဟာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ကျမကတော့ဤဆိုင်ကြီးမှာအလုပ်လုပ်ရတာ
ပျော်ပါတယ်။ တချိုကဧည့်သည်အတော်များများဟာ ကျမတို့ဆိုင်ကို လာနေကျမို့
လုပ်သက်(၅)နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျမနဲ့ အတော်ကိုရင်းနှီးနေပါပြီ။ မိဘမရှိတော့တဲ့
ကျမအတွက်ဆိုင်ကိုလာနေကျ ဧည့်သည်တွေဟာ ကျမရဲ့မိဘတွေလိုပါပဲ။ သူတို့ဆီက ဗဟုသုတတွေ၊ဆုံးမစကားတွေ၊အသိပညာတွေကိုကျမရယူခဲ့ရတယ်။အဲဒီထဲကမှ
ကျမကို သိပ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတချို့နဲ့ အားတဲ့အချိန်တွေမှာ ဧည့်ခံစကားပြောရင်း
ဗဟုသုတတွေရခဲ့ရတယ်။ သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားအချို့နဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံ
Mr.&Mrs.Gary။ ။ “နဂစ်”ဖြစ်တုန်းက အလှူငွေတွေထည့်ပြီး လူတွေ့တိုင်းမြန်မာပြည်အကြောင်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းတွေကို ရေပက်မဝင်အောင် အမြဲပြောတတ်ပြီး မြန်မာပြည်သူ/ပြည်သားတွေကို
သနားနေတဲ့ Mr.&Mrs.Gary တို့လင်မယား။
Mr.Steve&Mrs.Sandra။ ။ ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ဟာ
Mr.&Mrs.Harley။ ။အရက်မူးပြေချင်ရင် ကော်ဖီပျင်းပျင်း တခွက်သာသောက်လိုက်၊ အမူးပြေသွားလိမ့်မဒါပေမဲ့ ဘဝမူးသွားရင်တော့ ကော်ဖီပျင်းပျင်းတခွက်က
မင်းကိုကယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဘဝတော့မမူးစေနဲ့။
ဆုံးဖြတ်ချက်လေး တချက်မှားလိုက်တာနဲ့ လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊
Mr.Jeff&Mrs.Dod။ ။တတ်နိုင်သလောက်ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့“စ”ပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ငွေဆိုတာအလကား၊ကျန်းမာခြင်းကိုသာ
မက်မောတဲ့ သူ့ရဲ့နှလုံးကို စက်အစားထိုးပြီးအသက်ရှင်နေရသောJeff.
Mr.&Mrs.Charles။ ။ What is the meaning of B.U.R.M.A လို့ ဥာဏ်စမ်းထုတ်ရင်း စိတ်ညစ်နေတဲ့ကျမရဲ့အာရုံတွေကို
Mr.James&Mrs.Com။ ။အချစ်စစ်မှာ အသက်ကြီးတယ်
ကျမမသင်ယူပဲ လိုက်မရှာပဲ ကျမဘဝအတွက်
ကျွန်တော်တော့ အပေါ်ဆုံးအထပ်ကို ဘဘောကျတယ်...
ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ Idea က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဗဟုသုတရတာပေါ့။ တယောက်အတွေ့အကြုံတယောက် ရှယ်ရတာ။ :)
ဟုတ်တယ် နော် ခင်ရာဆွေမျိုးတွေက တစ်ခါတစ်လေဆွေမျိုးအရင်းတွေထက်ကောင်းတယ်
ကျနော့်မှာလည်း အဲလိုဇာတာပါတယ် အပြင်လူတွေက ကောင်းကြတယ် .. အဲဒါလည်းကုသိုလ်ပဲတဲ့ မေမေပြောဖူးတယ် ...
မိမိတိုင်းပြည်နဲ့အရမ်းဝေးကွာလွန်းပေမယ့် ခုလိုနွေးထွေးစွာခိုလှုံခွင့်ရတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ နေထိုင်ရတာဟာ အရမ်းကုသိုလ်ကံကောင်းပါတယ်
ဆိုင်လေးထဲကို နှင်း ကိုယ်တိုင်လာလည်သွားရသလို ခံစားမိတယ် ... ပျော်၇ွှင်ပါစေနော် မမ ...
ကိုတူးလေး...(ညရဲ့ကောင်းကင်) ကြိုက်တဲ့ အထပ်ကို ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်...။
ဂွတ်တယ် အဲလိုဆိုင်မှာလွေးဖူးချင်တယ် ဂလုဂလု
ကျနော်ကတော့ အလုပ်လုပ်ရတာကို ဝါသနာပါလို့
အမနဲ့ အတူတူ ဧည့်ကြို လာလုပ်မယ် ရမလား။
ဆိုင်လေးကအမိုက်စားလေးနော်... ဧည့်ကြိုလေးကချောလိုက်တာ... ခင်ရာဆွေမျိုးဆိုတာ ထောက်ခံပါတယ်.... ရောက်ရာအရပ်မှာအဆင်ပြေအောင်နေနိုင်တဲ့ ညီမလေးအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်...
ဆိုင်လေးရဲ့ အပြင်အဆင်က ချစ်စရာလေးပါ။ စနစ်လည်းကျတယ်နော်.။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု့လည်း ကောင်းလို့နေမှာပါ.။
ကိုညရဲ့ ကောင်းကင်ပြောသလိုပဲ. အပေါ်ဆုံးထပ်ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားသား ဗျ :).
တွေ့ တဲ့သူနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်း တတ်တဲ့ သူဆိုတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ။ဘယ်သူတွေ နဲ့ရှိ်ရှိ အဆင်ပြေနေမှာပါ ။။
တကိုယ်တည်း နေရတဲ့ အထီးကျန်ဘဝခြင်းတူ တော့ ကိုယ်ချင်းစာ မိပါတယ် ။
ခင်ရာဆွေမျိုးတွေကြားထဲမှာ ထာဝရ ပျော်ရွှင် နေနိုင်ပါစေ နတ်သမီး လေးရေ .
နတ်သမီးလေးရေ ခင်ရာဆွေမျိုးဆိုတာ သိပ်မှန်တာပေါ့ မိတ်ဆွေပေါများရင် ဘယ်သွားသွား၊ ဘာလုပ်လုပ် ဒုက္ခ မရောက်တတ်ဘူးလေ။ ဆိုင်ခန်းတိုက်က အတော်ကြီး မယ်ထင်တယ်နော်။
ဟုတ်ပါတယ် မရယ်။ ခင်ရာဆွေမျိုးတွေကပေးတဲ့
ရောက်ရာနေရာမှာ အထီးကျန်ဆန်လို့ ပျော်အောင်နေကြတာချင်းတူတူ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
စကားမစပ် မတို့ဆိုင်က ဈေးတော်တော်ကြီးမယ်နော်။
တစ်ခါလောက်တော့ လာစားဖူးချင်တယ်။ အဟိ
ဘ၀ဆိုတာဒီလိုပါပဲမရေ..တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ မှာတော့
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းသလိုလိုပါပဲ..ကြိုးစားရင် ဘာမဆို အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်မ။ အဓိက ကတော့ စိတ်ပါပဲ...